Fitsirihana tampoka tao amin’ny HJRA : omaly vao navela hijery an’i Claudine ny mpitsara | NewsMada
Fitsirihana tampoka tao amin’ny HJRA : omaly vao navela hijery an’i Claudine ny mpitsara
Par Taratra sur 17/05/2017
Nohamafisin’ny mpitsara vitsivitsy mpikambana eo anivon’ny SMM, taorian’ny fitsoirihana tampoka nataon’izy ireo, omaly fa ao amin’ny efitra faha-126, HJRA Razaimamonjy Claudine. Tokony efa natao afakomaly(alatsinainy 15 mey izany saingy tsy tanteraka noho ny sakantsakana.
Afaka nijery sy niditra ny varavarana faha-126 etsy amin’ny HJRA ny mpitsara Faniry Ernaivo rehefa nahazo alalana avy amin’ny mpampanoa lalàna. Tsy afaka niatrika izany ny mpanao gazety noho ny fepetra noraisin’ny eo anivon’ny hopitaly. « Mbola ao Razaimamonjy Claudine amin’izao 11 ora sy 20 mn izao… », hoy ny mpitsara Faniry Ernaivo nitatitra izany amin’ny mpanao gazety avy eo. Nambarany fa tafiditra amin’ny asan’izy ireo ny fijerena sy fanaraha-maso ireo voafonja tsaboina eny anivon’ny hopitaly. Voalaza fa nisarona lamba izy ary nosokafana ary voamarina ny maha ao amin’ny HJRA azy. Roa ireo mpiandry fonja miambina ity mpandraharaha ity. Voasoratra anaty kahie firaketana avokoa ireo tonga mitsidika an-dRazaimamonjy Claudine. Anisan’izany ny ben’ny Tanànan’Ambohimahamasina, i Tsabo Pierre, sy ny loholona Andriamandavy Riana.
Na izany aza anefa, efa nikasa ny hijery azy tao ireto mpitsara ireto, afakomaly hariva, saingy tsy tanteraka izany noho ny ambara fa sakana samihafa. Efa alina be koa vao vita ny antontan-taratasy nahafahana nanao ny fitsirihana ka omaly vao tanteraka… Misy dikany avokoa izany ? Voahelingelina hatrany ny mpitsara raha mikasa hanao fitsirihana tampoka amin’ny voalohany ?
Niharan’ny sakantsakana vao tanteraka…
Tsy vao voalohany ny sakantsakana nahazo ireto mpitsara ireto izao. Voasakana mialoha tamin’ny alalan’ny loholona Andriamandavy Riana ny voalohany. Niverina amin’ny fijerena faharoa vao tanteraka izany. Hita sy tazana eo tokoa ny marary…
Tsiahivina fa narahina mpitandro filaminana maromaro izao fanaraha-maso izao, ankoatra ireo mpanao gazety. « Maro loatra ny olona ato ka manelingelina nefa efa nitondra ny fahazoan-dalana mazava tsara ny mpitsara ka azo ekena sy tanterahina ny fijerena azy », hoy ny tompon’andraikitry ny hopitaly, ny Dr Rasamimanana Jean Marie.
Ankoatra izany, nahitana mpitandro filaminana maromaro koa taty ivelany ary voalaza fa efa hatramin’ny omaly maraina izany.